28 Diyaaradood Oo Sanadkan Lagu Soo Riday Dalka Afghanistan. – Bogga Calamada.com
28 Diyaaradood Oo Sanadkan Lagu Soo Riday Dalka Afghanistan.
December 31, 2016 9:42 am Views: 19
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa sanadkan dhamaaday ee 2016-ka fuliyay howlgalo culus oo ka dhan ah ciidamada Kufaarta NATO iyo kuwa maamulka daba dhilifka Afghanistan.
Howlgalada ayaa isugu jira dagaalo toos ah’Istish-haadiyo’qaraxyo iyo weeraro lala beegsaday diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan’waxaa tirada howlgaladaasi lagu soo bandhigay qoraal Imaarada kasoo baxay.
Tirada guud ee howlgalada sanadka dhamaaday gudaha dalka Afghanistan ka fuliyeen ciidamada Imaarada Islamiga ayaa gaaraya (9153) (Sagaal Kun Boqol iyo Konton iyo Saddex) weerar.
Weeraradaasi waxaa ku jirta (32) (Sodon iyo Labo) weeraro ah Camaliyaad Istish-haadi ah oo lala beegsaday saraakiil’ciidamo iyo xarumo ay leeyihiin Kufaarta NATO sida Mareykanka iyo maamulka daba dhilifka Afghanistan.
Qaar ka mid ah weeraradaasi waxaa lagu dilay (266) (Labo Boqol Lixdan iyoÂ Lix) isugu jirta saraakiil iyo askar NATO ah oo u badan askar iyo saraakiil American ah’waxaa sidoo kale weeraradaasi lagu dhaawacay (135) (Boqol Sodon iyo Shan) askarta gaalada NATO ah.
Sidoo kale waxaa weeraradaasi lagu dilay (17539) (Toban iyo Todabo Kun Shan Boqol Soddan Iyo Sagaal) isugu jirta saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan’waxaa sidoo kale weeraradaasi lagu dhaawacay(11272) (Kow iyo Toban Kun Labo Boqol Todobaatan iyo Labo) kuwaasi oo ah saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan maamulka fadhigiisu yahay magaalada Kaabul.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in weeraradaasi lagu gubay (3427) (Saddex Kun Afar Boqol Labaatan iyo Todabo) gaari oo ka kooban noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa daba dhilifka dalkaasi.
Ugu dambeyntii qoraalkaasi waxaa lagu soo bandhigay tirada guud ee diyaaradaha dagaalka ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay dhulka soo dhigeen sanadkan dhamaaday ee 2016-ka.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Afghanitsan ayaa sanadkan burburiyay (28) (Sideed iyo Labaatan)diyaaradood ay lahaayeen shisheeyaha iyo maamulka daba dhilifka ee ciidamada Mareykanka ku ilaaliyaan magaalada Kaabul’waxey diyaaradahaasi isugu jiraan.
1-Â (14) (Afar iyo Toban) Elecobtar.
2- (10) (Toban) diyaaradood oo ah noocyada basaaska ee duuliye la’aanta ah.
3- (2) (Labo) diyaaradood oo ah noocyada dagaalka eeÂ looyaqaana F16
4- (2) (Labo) diyaaradood oo ah noocyada xamuulka ee sahayda ay ku kala gudbistaan ciidamada NATO iyo kuwa maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan.
Dalka Afghanistan ayaa ka mid ah dalalka lagu qaaday weerarada ay horkaceysa dowlada Mareykanka’waxa uu sidoo kale Afghanistan kaalinta hore kaga jiraan wadamada lagu jabiyay gaalada kusoo duushay wadamada Islaamka.